Tohin’ny hetsika fizarana aro-vava
Mbola notohizana androany ny fizarana aro-vava izay nandraisan’ny Ministeran’ny Fitsarana anjara mavitrika tamin ny Fokontany 10 teto amin’ny Firaisana I, tsy nohadinoin’Andriamatoa Johnny Richard ANDRIAMAHEFARIVO Ministry ny Fitsarana koa ny nizara sy nanome izany tamin’ireo mpiara-miasa aminy eo anivon’ny Fitsarana Tampony sy ny Lapan’ny Fitsarana Anosy satria misy tokoa ireo mpiasan’ny Fitsarana manefa izany asa masina izany. …
Hetsika fizarana aro-vava
Iray amin’ireo Fokontany nanohizana ny asa fizarana aro-vava iandraiketan’ny Ministeran’ny Fitsarana ny tao Avaratetezana Bekiraro Boriboritany voalohany, ny Ministry ny Fitsarana koa dia nidina ifotony nizara sy nanentana ny amin’ny tsy maintsy itondrana izany, ary nitondra fanazavana ny amin’ny tambavy Covid-organics izay tena ilain’ny Malagasy ary maro no miandrandra fahasalamana avy aminy. Mbola mitohy hatrany …
Hetsika fizarana AntiCovid19
Natomboka tamin’ny fomba ofisialy androany 22 aprily 2020 ny hetsika fizarana AntiCovid19 (Aro-vava, Covid-organics ary ny dosette infusion)avy amin’ny fitondram-panjakana foibe, ka notanterahana teo amin’ny parvis Analakely izay notarihan Atoa Naina ANDRIATSITOHAINA , « Ben’ny Tanànan’ Antananarivo ». Nifarimbonan’ny Foloalindahy, ny Ministera’ny Fitsarana ary ny fiadidiana ny tanànan’Antananarivo izany, izay teo ambany fitantanan’ny Fiadidiana ny tanànan’Antananarivo, ka …
Fanomezana fanampiana ireo olona voafonja ao amin’ny Fonjaben’ny Manakara
Notontosaina ny Alatsinainy 20 aprily 2020 maraina tao Manakara (Faritra Vativavy 7 Vinany) ny lanonana fanomezana fanampiana ireo olona voafonja ao amin’ny Fonjaben’ny Manakara avy amin’ny CIZAMA (Congrégation Indienne ZAnatany de Madagascar). Tonga nitondra ny teny fisaorana sy fankasitrahana tamin’izany ny Tale Jeneralin’ny Fandraharana ny Fonja izay nisolotena ny Ministry ny Fitsarana. Nanontrona izany lanonana …
Tao aorian’ny antso avo nataon’ny Filoham-pirenena Andriamatoa Andry RAJOELINA ny ho amin’ny firaisankina sy fifanomezan-tanan’ny samy Malagasy, dia tonga nanantanteraka sy nanatitra fanampiana ny fikambanana CIZAMA (Congrégation Indienne ZAnatany de MAdagasccar) eto Antananarivo. Notolorana ny Ministeran’ny Fitsarana izay notarihan’Andriamatoa Johnny Richard ANDRIAMAHEFARIVO, Ministry ny Fitsarana niaraka tamin’ireo mpiara-miasa aminy akaiky izany fanomezana sy fanampiana izany, …